Nampahafantarina ny zoma 12 Martsa 2021 ny rafitra sy ireo mpikambana ao amin’ny birao foiben’ny antoko UNDD, hitondra hatramin’ny fotoana, hanatanterahana ny kongresy nasionaly, rafitra mpanapa-kevitra eo anivon’ny antoko.
Nitondra ny fomba fijeriny mikasika ny raharaham-pirenena ihany koa ny UNDD, ka nanambara tamin’ny fomba mazava sy tsy mivilivily fa mandalo kihon-dàlana sy fotoan-tsarotra indray ny firenena.
Mahatsiaro tena ho manana zo sy andraikitra hijoro sy hitondra ny anjara-birikiny amin’ny fiatrehana sy fitadiavana vahaolana amin’izany ny antoko ; vahaolana izay tsy maintsy miainga sy mifototra amin’ny firaisankina, fiaraha-mientana sy fivondronan’ny Malagasy rehetra.
Nanipika mazava ny UNDD fa amin’izao krizy mafy diavin’ny firenena, ary mbola ahina ho mafy dia mafy izao, dia tsy vaha-olana ny fanonganam-panjakana ; nefa manindry mafy fa asa vadi-drano ny raharaham-pirenena ka hiara-misalahy hamadika ny pejin’ny fahantran’ity tanindrazana iombonana ity, hiara-misalahy hanorina firenena vaovao sy vanona.
Miantso ny Filohan’ny Repoblika sy ny fitondrana izay tarihiny ny Antoko UNDD mba handray ny fepetra rehetra azony atao mba hirosoana amin’izany sy hametrahana filaminana maharitra eto amin’ny firenena sy hampihavanana marina ny Malagasy mba tena hahazoana miroso tsy misy sakantsakana amin’ny asa fampandrosoana ;
Manao antso avo amin’ny hery velona rehetra hiara-mientana hampijoro Repoblika Malagasy vaovao, miray ao anatin’ny fahasamihafana, mitsinjara fahefana, mandroso amin’ny fomba mirindra, mihavana tanteraka, ary mahatsiaro fa tena "samy Malagasy" feno.